June 14, 2019 – Internet Journal
[ Zawgyi ] Price : (1,290,000 Ks [64GB]) အားသာချက် မြင့်မားကောင်းမွန်တဲ့ ကင်မရာစနစ်နဲ့ ပိုမိုတိုးတက်လာတဲ့ ၆.၃ လက်မ OLED screen တွေက သဘောကျစရာပါ။ ပြည့်ဝကောင်းမွန် လှတဲ့ ဘက်ထရီပိုင်းက ဒီဖုန်းရဲ့ အားသာချက်ပါ။ အားနည်းချက် ဖုန်းရဲ့ အရွယ်အစားအရဆိုရင်တော့ Pixel3လိုမျိုး လက်တစ်ဖက် နဲ့ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရတာ သိပ်မလွယ်ကူဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဈေးနှုန်းမြင့်မားတာတွေက သူ့ရဲ့အားနည်းချက်လို့ ပြောရမှာပါ။ CPU ဒီဖုန်းမှာ 10nm Snapdragon 845 chip ကို အသုံးပြုထားပြီး ဒီ chipset က လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း မြင့်မားကောင်းမွန်မှု အမြင့်ဆုံး chipset ဆိုတာကတော့ ငြင်းမရတဲ့အချက်ပါ။ RAM […]
[ Zawgyi ] ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်းပေါင်းစွာကို လေ့လာနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းဟင်းလျာ၊ အနောက်တိုင်းဟင်းလျာ၊ ဂျပန်စတိုင်ချက်ပြုတ်နည်း၊ ဗီယက်နမ်ချက်ပြုတ်နည်း၊ လာအိုဟင်းလျာ၊ စင်ကာပူစတိုင်ချက်ပြုတ်နည်း၊ မက်ဆီကန်စတိုင်၊ ဖိလစ်ပိုင်စတိုင် စတဲ့ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း အစုံကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာချက်ပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ လေ့လာနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းအခြေပြု App ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်း၊ Offline ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Download လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Download လုပ်ပါ။ -ရဲထွဋ်ဝင်း [ Unicode ] ဟငျးလြာခကျြပွုတျနညျးပေါငျးစှာကို လလေ့ာနိုငျမယျ့ App ဖွဈပါတယျ။ ထိုငျးဟငျးလြာ၊ အနောကျတိုငျးဟငျးလြာ၊ […]
[ Zawgyi ] Uber ရဲ့ Uber Elevate အစီအစဉ်အရ ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ ဆန်ဒီယေဂိုမြို့အတွင်း MacDonald’s နဲ့ အခြားမြို့တွင်း စားသောက်ဆိုင်က စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို နေအိမ်ဆီ စတင် ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှုက ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး Uber Eats နှုန်းထားအတိုင်း ကျသင့်မယ်လို့ Uber က ပြောထားပါတယ်။ Uber အနေနဲ့ အဲဒီဝန်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ဖို့ ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆီက ထောက်ခံချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ ဒရုန်းနဲ့အစားအသောက်ပို့ဆောင်တာကို နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Uber ကပြောကြားထားပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ လူတွေဆီ ဒရုန်းနဲ့ အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရုံမကဘဲ ခရီးသွားလာနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ Uber ရဲ့ ကားပျံတက္ကစီဝန်ဆောင်မှု တတိယမြောက်စမ်းသပ်မှု နယ်မြေဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့ဖြစ်တယ်လို့ […]
[ Zawgyi ] ကစားသူက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဂိမ်းဟာ အပျင်းပြေကစားနိုင်ပါတယ်။ ကစားသူက ရန်သူက တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုလည်း ရှောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ -သီဟ [ Unicode ] ကစားသူက ကြူးကြျောဝငျရောကျလာတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှကေို ဖကျြဆီးတိုကျခိုကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခုဂိမျးဟာ အပငျြးပွကေစားနိုငျပါတယျ။ ကစားသူက ရနျသူက တိုကျခိုကျနတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှကေိုလညျး ရှောငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Download ပွုလုပျလိုသူမြား ဒီနရောကို နှိပျပါ။
[ Zawgyi ] Jetpack Jump ဂိမ်းက jetpack ကိုအသုံးပြုပြီး ကောင်းကင်ပေါ် ခုန်တက်ပျံသန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူက jetpack ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ခပ်မြန်မြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူရဲ့ အကွာအဝေးအရ အမှတ်တွေကို ဖော်ပြပေးပြီး အရင်စံချိန်ကို ချိုးဖျက်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ -သီဟ [ Unicode ] Jetpack Jump ဂိမျးက jetpack ကိုအသုံးပွုပွီး ကောငျးကငျပျေါ ခုနျတကျပြံသနျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကစားသူက jetpack ကိုအဆငျ့မွှငျ့တငျပွီး ခပျမွနျမွနျသှားရမှာဖွဈပါတယျ။ ကစားသူရဲ့ အကှာအဝေးအရ အမှတျတှကေို ဖျောပွပေးပွီး အရငျစံခြိနျကို ခြိုးဖကျြဖို့ ကွိုးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Download ပွုလုပျလိုသူမြား ဒီနရောကို နှိပျပါ။
[ Zawgyi ] COWBOY! ဂိမ်းဟာ အမေရိကန် အနောက်ဘက်နယ်တစ်ကြောမှာ ကြိုးကွင်းတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ဖမ်းဆီးရပါမယ်။ ကစားသူက တိရစ္ဆာန်တွေ ဖမ်းဆီးတဲ့အခါ ပိုက်ဆံတွေရရှိပြီး upgrade တွေလုပ်နိုင်သလို ကြိုးကွင်းအရှည်တွေကို တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကစားသူက မြင်းကျား၊ သားပိုက်ကောင်တွေနဲ့ ရှဉ့်တွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးရပါမယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ -သီဟ [ Unicode ] COWBOY! ဂိမျးဟာ အမရေိကနျအနောကျဘကျနယျတဈကွောမှာ ကွိုးကှငျးတှနေဲ့ တိရစ်ဆာနျတှေ ဖမျးဆီးရပါမယျ။ ကစားသူက တိရစ်ဆာနျတှေ ဖမျးဆီးတဲ့အခါ ပိုကျဆံတှရေရှိပွီး upgrade တှလေုပျနိုငျသလို ကွိုးကှငျးအရှညျတှကေို တိုးခြဲ့နိုငျပါတယျ။ ကစားသူက မွငျးကြား၊ သားပိုကျကောငျတှနေဲ့ ရှဉျ့တှကေိုလညျး ဖမျးဆီးရပါမယျ။ Download ပွုလုပျလိုသူမြား ဒီနရောကို နှိပျပါ။
[ Zawgyi ] Godzilla Defense Force ဂိမ်းမှာ ကစားသူက ကိုယ်ပိုင် အခြေစိုက်စခန်းကို ဂေါ်ဇီလာတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ မွန်းစတားဘုရင် ဂေါ်ဇီလာနဲ့ TOHO ရဲ့တရားဝင်အခြား ကိုင်ဂျူကောင်တွေပါဝင်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက မြို့တွေကို အကောင်ကြီးတွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပြီး ကမ္ဘာကိုကယ်တင်ဖို့ အကောင်ကြီးတွေကို အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ရပါမယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ -သီဟ [ Unicode ] Godzilla Defense Force ဂိမျးမှာ ကစားသူက ကိုယျပိုငျ အခွစေိုကျစခနျးကို ဂျေါဇီလာတှရေနျကနေ ကာကှယျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဂိမျးထဲမှာ မှနျးစတားဘုရငျ ဂျေါဇီလာနဲ့ TOHO ရဲ့တရားဝငျအခွား ကိုငျဂြူကောငျတှပေါဝငျလာပါတယျ။ ကမ္ဘာတဈဝနျးက မွို့တှကေို အကောငျကွီးတှေ ရနျကနေ […]
[ Zawgyi ] ပင်လယ်အတွင်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ စစ်ဆင်ရေးလုပ်နိုင်မယ့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေငုပ်သင်္ဘော အစုလိုက်ကို ထိန်းကျောင်း အမိန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူက ဖျက်အားပြင်းတဲ့ တောပီဒိုတွေနဲ့ ရန်သူတွေကို ဖြိုခွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေအောက်က သဘာဝကျတဲ့ 3D ရေကြောင်းတိုက်ပွဲကို ကြည့်နိုင်မှာပါ။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ -သီဟ [ Unicode ] ပငျလယျအတှငျး အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ စဈဆငျရေးလုပျနိုငျမယျ့ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ ရငေုပျသင်ျဘော အစုလိုကျကို ထိနျးကြောငျး အမိနျးပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ကစားသူက ဖကျြအားပွငျးတဲ့တောပီဒိုတှနေဲ့ ရနျသူတှကေို ဖွိုခှဲရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပငျလယျရအေောကျက သဘာဝကတြဲ့ 3D ရကွေောငျးတိုကျပှဲကို ကွညျ့နိုငျမှာပါ။ Download ပွုလုပျလိုသူမြား ဒီနရောကို နှိပျပါ။
[ Zawgyi ] ၂၀၁၈ ခုနှစ် စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေသည် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဇွန် ၁၂ ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့် ကျောင်းလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရေး အမျိုးသား အဆင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံ ပညာကျောင်းပေါင်း ၄၇,၀၀၅ ကျောင်း၊ ဘုန်း တော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းပေါင်း ၁၅၂၇ ကျောင်းနဲ့ အခြေခံပညာကျောင်းသား ကျောင်းသူပေါင်း ၉,၁၄၄,၄၆၉ ဦး၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူပေါင်း ၃၀၉,၉၃၈ ဦးရှိသည့်အပြင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေ ကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေသည် […]